parthenogenesis ကဘာလဲ? - AFRIKHEPRI
ယူဂိုချားဗေ့စ်၏ ၆၁ ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွင်မိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်း
La parthenogenesis (ထို ဂရိ parthenos, အပျိုစင်, ကမ်ဘာဦး, မွေးဖွား) ကနေဌာနခွဲဖြစ်ပါတယ် gamete ဓာတ်မြေသြဇာမ။ ၎င်းသည်ကြင်ဖော်မဲ့မိတ္တူကူးခြင်းစနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လိင်ဆိုင်ရာမျိုးပွားခြင်းပုံစံများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူသည် gamete ၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုလိုအပ်သောကြောင့်အခြားတစ် ဦး တစ်ယောက်၏မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏အလှူငွေထည့်ဝင်မှုမရှိခြင်းကြောင့်ရလဒ်မှာလိင်မှုဆိုင်ရာမျိုးပွားခြင်းနှင့်ဆင်တူသည်။
ဤဖြစ်စဉ်သည်အချို့သောအပင်နှင့်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များတွင်သဘာဝအတိုင်းတွေ့ရှိရပြီး၊ အပင်နိုင်ငံတွင် parthenogenesis သည်အဆန်းမဟုတ်ပါ angiosperms။ Parthenogenesis အများအပြားအတွက်ဖြစ်ပေါ် taxa comm Les ယကျရောက်, les polychaete, les oligochaete, les nemerteans, les arthropods (ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အင်းဆက်ပိုးမွှားအပါအဝင်ပျား et les aphids), les gastrotrichs တချို့ တွားသွားသတ္တဝါ.
"parthenogenesis များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ femininity မှတရားမျှတစွာဖြစ်ရန်အတွက်" ဒေါက်တာအီး Roge ရှင်းပြသည်။
parthenogenesis လူ့မြေသြဇာ, created နိုင်သည့်မထွက်ရတဲ့စူပါပြိုင်ပွဲတစ်ဦးထက်ပိုသောခေတ်မီနည်းလမ်း၏တည်ရှိမှု၏သိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထား - လည်းပိုမိုမြင့်မားသောအရာတိရိစ္ဆာန်နဲ့နည်းလမ်း၏သီးခြားနည်းလမ်း, သောဆယ်ကိုးကညာမိခင်များ အင်္ဂလန်လူ့ parthenogenesis ၏စစ်မှန်သောအမှုများအဖြစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဗြိတိန်ဆရာဝန်များ၏အုပ်စုတစုကအတည်ပြုခြင်းနှင့်ဗြိတိသျှဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Association ကအသိအမှတ်ပြုအဖြစ်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က, သားသမီးထုတ်လုပ်ရန်, ဒါမှမဟုတ်ကညာမွေးခြင်းဖြင့်နှင့်နိုင် ရေးသားသူကပြောပါတယ်။ မည်သည့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကလုပျနိုငျ - ဤမိန်းမတို့သည်အဘယ်သို့ပြုသည်ကိုကြောင်းကြေညာ။
Futura သိပ္ပံ။ ဧပြီလ 2004 ဂျပန်များ၏အတွေ့အကြုံကို။
ဇီဝဗေဒ၏သစ်တရားသေအယူဝါဒဂျပန်တွင်ကောက်ယူစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအားဖြင့်ထိခိုက်ပျက်ပြားစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ fertilization မပါဘဲ parthenogenesis -a မျိုးပွားပေါ်မှာအလုပ်လုပ်အာရှသိပ္ပံပညာရှင်များ, တစ်ဦးsexuée-မျိုးစိတ်အတွက်အထီးမလိုဘဲဒါနှစ်ခုမျိုးရိုးဗီဇမိခင်များနှင့်အတူဒီဇိုင်းမောက်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမဖခင်မှမွေးဖွားပေးစေခြင်းငှါစီမံခန့်ခွဲပါပြီ။ တစ်နို့တိုက်သတ္တဝါတစ်ဦးပထမဦးဆုံး။ လူအားလုံးတို့သည်နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းသတိပေးလျက်ကိုယ်ပွားကနေအလွန်ကွဲပြားခြားနားသော, နည်းပညာနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာနှစ်ဦးစလုံးအကြောင်းပြချက်များအတွက်, လူသားတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းမှလျှောက်ထားမရနိုင်ပါ။ ကိုယ်စားပေါ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုမှာအကယ်စင်စစ်အကြင် DNA ကိုကသန္ဓေသား၏ဒီဇိုင်း၌အထီးအဖြစ်ပြုမူစေရန်ပြောင်းလဲထားပြီးမောက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေသန္ဓေသားအတွက်, မျိုးဗီဇ, အလွန်နည်းပါးသူတို့ဖခင်ဒါမှမဟုတ်မိခင်အားဖြင့်မှတဆင့်ကူးစက်သောရှိမရှိပေါ်တွင်မူတည်ကွဲပြားခြားနားထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ "ဒါဟာ Imprint ရဲ့" ကြာသပတေးနေ့ကတော့ AP သတင်းဌာန, ပါမောက္ခ Axel Kahn, ပဲရစ်ကိုချင် Institute ၏ညွှန်ကြားရေးမှူးမှာရှင်းပြတယ်။ သူတို့မိခင်ကနေလာကြပြီးအဖေနှင့်အပြန်အလှန်အနေဖြင့်ရောက်လာသောအခါတိတ်ဆိတ်စွာနေလျှင်ထိုအမျိုးဗီဇများအနက်အချို့သာကိုသက်ဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းတို့၏အလုပ်ထုတ်သယ်ဆောင်ရန်, သုတေသီများသည်သူ၏အများအားဖြင့်အသံတိတ်တဦးမျိုးဗီဇကိုဖော်ပြခွင့်ပြု၎င်း၏ "Imprint" နောက်ပြန်ဆုတ်နေဖြင့်အမျိုးသမီး mouse ကို၏မျိုးဗီဇမိတ်ကပ်ပြုပြင်မွမ်းမံ။ ဒါဟာအမျိုးသမီးကြွက်အထီးကြွက်တွေမှာပြုမူဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သောဤ transgenesis ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာမြေသြဇာတစ်ဦး mouse ကိုဖခင်တစ်ဦးအနေဖြင့် DNA ကိုမပါဘဲဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်ပါသည်လျှင်သုတေသီ Pennsylvania ပြည်နယ်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှ Kent Vrana ဘို့, ကအတူတူပင်စည်ဆဲလ်များအတွက်မှန်ကြောင်းမျှော်လင့်နေသည်။
ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ : ပထမလိင် - ဧလိရှဗက်သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင် Davis က - 1971
အမျိုးသမီးမျိုးပွားအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းလူထက်အများကြီးအသက်ကြီးပြီးအများကြီးပိုအဆင့်မြင့်ဖြစ်ကြသည်။ တောင်မှနိမ့်နို့တိုက်သတ္တဝါများသည်သားဥအိမ်, သားအိမ်, လိင်အင်္ဂါ, etc ထဲမှာအမျိုးသမီးမျိုးပွားမှုစနစ်သဘောသဘာဝအားဖြင့်စုံလင်ပထမဦးဆုံးအရာတစျခုဖွစျသညျကိုဖေါ်ပြခြင်း, အမျိုးသမီးများ၏သူတို့အားဆင်တူသည်။
cons, ယောက်ျားမျိုးပွားအင်္ဂါ, ဝှေးစေ့နှင့်လိင်တံအဘို့, အဖြစ်ဝေးခြေပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ်, မျိုးစိတ်နှင့်အီဗိုလူးရှင်း၏သင်တန်းအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနား - ခြေဖို့ဖိနပ်။ ဒါကြောင့်လိင်တံပုံလိင်တံ fit မှလိင်အင်္ဂါ, မလိင်အင်္ဂါမှလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲ။ လိင်တံနောက်ပိုင်းတွင် vulva ထက်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့သည်; ဒီမူရင်းအမျိုးသမီးသတ္တဝါတစ်နှောင်းပိုင်းကပြောင်းလဲမှု၏အထီးသူ့ဟာသူရလဒ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်ရှင်းလင်းထားပါသည်။ လူသည်မစုံလင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Geneticists နှင့် physiologists အထီးထုတ်လုပ်သော Y ကိုခရိုမိုဆုန်းတစ်ခုက X ခရိုမိုဆုန်းကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြ - ထို အမျိုးသမီးခရိုမိုဆုန်း - ကျိုးပဲ့ခြင်းနှင့်ပုံပျက်နေသော။ လူတို့သညျတစျဦးကသူ၏မိခင်ထံမှ X ကိုခရိုမိုဆုန်းနှင့်သူ၏ဖခင်ထံမှ Y ကိုခရိုမိုဆုန်းရှိစဉ်အခါအားလုံးအမျိုးသမီးများ, နှစ်ခုက X ခရိုမိုဇုန်းရှိသည်။ သဘာဝတရား၏မတော်တဆမှု - - နှင့်မူလကတစ်ဦးတည်းသာလိင်ရှိကွောငျး - အမျိုးသမီးဒါဟာနည်းနည်းလိမ် Y ကိုခရိုမိုဆုန်းတစ်မျိုးဗီဇအမှားကြောင်းကိုအလွန်ယုတ္တိပုံရသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမပါဘဲအမျိုးသမီးမျိုးပွား, parthenogenesis, မသာဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ဖြစ်ကောင်းအနေနဲ့လုံးဝအမျိုးသမီးကမ်ဘာပျေါတှငျမျိုးပွါးများ၏ဟောင်းတဦးတည်းနည်းလမ်းတစ်ခု atavistic အကျန်အကြွင်းကဲ့သို့ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာရှိကဒီမှာတွေ့သည်။ 1911 အတွက် Jacques Loeb အားဖြင့် parthenogenesis အထောက်အထားများ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကတည်းက "ကျနော်တို့ကလူကိုမျိုးပွါးအဘို့မလိုအပ်ကြောင်းကိုငါသိ၏နှင့်ဖြစ်ပေါ်စေရန်လုံလောက်သည့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက်လက်ဆောင်ရိုးရှင်းတဲ့ရူပအေးဂျင့်"[Raymond Becker က] ။
Isis, parthenogenesis ၏နတ်ဘုရားမ-မိခင်
Isis, ရှေးခေတ်အီဂျစ်, ထိုဘုရားသခငျ၏အမိ၏နတ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကမှ လာ. , ဒါကြောင့်လည်းအပျိုကညာနတ်ဘုရားဖြစ်၏ သန့်ရှင်းသောမြို့တော်အတွက် Sais ဘုရားကျောင်း, မာနထောင်လွှားကမ္ပည်းခဲ့ကြသည်: ငါ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကိုမည်သူမျှမရုပ်သိမ်းခဲ့ပါ၊ ငါမွေးသောအသီးသည်နေဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ၏မာနသည်ဤမြင့်မြတ်သောစကားများဖြင့်ထွက်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းသည်လူသားနှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်းကြေငြာသည်။ ၎င်းသည်မျိုးပွားရန်အတွက်၎င်း၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ ဂရိကဒီကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ပြောဆိုမှုကိုတုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်။ ဂျူပီတာသည်နတ်ဘုရားများ၏ဖခင်ဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးများ၏အကူအညီမပါဘဲ Minerva ကိုမွေးဖွားလိမ့်မည်။ Minerva သည်လည်းနတ်ဘုရားမဖြစ်သည်။ "ဒါကအမိဝမ်း၏မှောင်မိုက်၌ဒီဇိုင်းမခံခဲ့ရ", အမျိုးသမီးရဲ့မိသားစု၏ရန်သူဖြစ်လိမ့်မည်။
SOURCE မှ: http://matricien.org/patriarcat/bio-genetique-psy/parthenogenese/